आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य? - सिम्रिक खबर
आजको काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ८.८ डिग्री सेल्सियस बाइडनको पद बहालीमा हुनसक्ने द्न्द्वलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा उच्च सुरक्षा सतर्कता आजबाट उपत्यकाका धेरैजसो विद्यालयहरु संचालनमा आउने इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटी महत्वपूर्ण जीतसहित दोस्रो स्थानमा उक्लियो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै हेर्नुहोस् आज माघ ४ गते आइतवार जनवरी १७ तारीखको राशिफल, भगवान शिवले सबैको रक्षा गरुन्
आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य?
• ३ महिना अगाडि
काठमाडौं । गत साता निरन्तर ओरालो लागेको सुनको भाउ आजको दिन भने स्थिर रहेको छ । साताको सुरुकै दिन आइतबार ८ सयले बढ्दै तोलाको ९५ हजार ६ सय पुगेको सुनको मूल्य आज भने घटबढ भएको छैन । गत शुक्रबार तोलाको ९४ हजार ८ सय थियो । यस्तै तेजावी सुनको भाउ ९५ हजार १ सय कायम छ । गत शुक्रबार ९४ हजार ३ सय थियो ।
यसैगरी आज चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ । आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ४० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार २३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने आज १० रुपैया बढेर १२४५ पुगेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार १९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस १९ सय ३० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहको छ।
आजको काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ८.८ डिग्री सेल्सियस
बाइडनको पद बहालीमा हुनसक्ने द्न्द्वलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा उच्च सुरक्षा सतर्कता
आजबाट उपत्यकाका धेरैजसो विद्यालयहरु संचालनमा आउने
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटी महत्वपूर्ण जीतसहित दोस्रो स्थानमा उक्लियो
आज तोलामा ४ सयले घट्यो सुनको मूल्य
आज प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ९ सय पुग्यो
बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आज तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढ्यो सुनको मूल्य